October 3, 2021 - Celegroup
October 3, 2021 Celegroup1975 0
Fb ေခတ္စားလာသည္ႏွင့္အမၽွ သူ႔ခ်စ္သူမွန္း ကိုယ့္ခ်စ္သူမွန္း မသိျဖစ္လာတယ္ သစၥာတရား ကင္းမဲ့လာတယ္ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈ ေပ်ာက္ကြယ္လုျဖစ္လာတယ္။အိမ္ေထာင္သယ္ေတြကအပ်ိဳ လူပ်ိဳ လုပ္လာတယ္ အဖိုးႀကီး အဖြားႀကီးေတြ ေက်ာင္းကန္အေရာက္နဲလာတယ္ စကားေတြမပီကလာပီကလာေျပာမွ ေခတ္မွီတယ္အသိနဲ႔ သြားက်ိဳးၾကားကေလထြက္သလို စကားကိုမပီေအာင္ တမင္လုပ္ေျပာလာၾကတယ္… Post တင္တဲ့အခါ တင္တဲ့Postကို အေသအခ်ာမဖတ္ပဲ ပါးစပ္အရသာခံ ေခ်ာေခ်ာ မေခ်ာေခ်ာ အသားယူေျပာတဲ့သူေတြေပါလာတယ္ လူတက္ႀကီးလုပ္ပီး အႀကံေပးသလိုလိုနဲ႔ ေဝဖန္ေရးသမားေတြေပါလာတယ္ ေရးခ်င္တာေတြေရး postမွာ like mentရေရး ေအာက္က်ခံ […]
သားသမီးကံ မေကာင္းလို႔ အိုမင္းတဲ့အခ်ိန္မွာ ဒုကၡေတြ႕ေနရတဲ့ မိခင္အိုႀကီးလို႔ ေျပာရမွာပါပဲ
ေနအိမ္အျပင္ဖက္မွာ သားသမီးေတြက မေကြၽးေမြးလို႔ အိပ္စက္ေနခဲ့ရတဲ့ အဘြားအို မိဘေတြကိုျပန္ၿပီး ေကြၽးေမြးေစာင့္ေရွာက္ရမွာကို ေၾကာက္ၾကတဲ့ သားသမီးေတြရွိၾကပါတယ္ ။ ဒီတစ္ေခါက္မွာလည္း အဘြားအိုတစ္ဦးဟာ ေနအိမ္အျပင္ဖက္ ဝါးနဲ႔ျပဳလုပ္ထားတဲ့ ၾကမ္းျပင္ေပၚမွာ အိပ္စက္ေနခဲ့ရပါတယ္ ။ ေခါင္းအုံးမွာလည္း အဆင္ေျပတဲ့ဟာနဲ႔အသုံးျပဳခဲ့ၿပီး ၊ ခႏၶာေအာက္ပိုင္းကို ပိတ္စေလးနဲ႔ အုပ္ထားကာ ထီးေလးနဲ႔မိုးထားခဲ့တာကို ေတြ႕ရွိရမွာပါ ။အဘြားအိုဟာ ထၿပီး လမ္းေလွ်ာက္ႏိုင္ပုံလည္းမရပါဘူး ။ ဒါေၾကာင့္ ေနအိမ္အျပင္ဖက္မွာ အိပ္စက္ၿပီးေနထိုင္ေနျခင္းက ပတ္ဝန္းက်င္က စြန႔္က်ဲေပးကမ္းတဲ့ စားစရာေတြကိုသာ […]
Unicode ကင်းမြီးကောက်ပမာ သားသမီးတွေ မဖြစ်ပါစေနဲ့ ကင်းမြီးကောက် မိခင်တွေရဲ့ သဘော သဘာဝ က ကလေးပေါက်ဖွားပြီးတဲ့နောက်မှာ မိမိ ကလေးတွေကို မိမိ ခန္ဓာကိုယ်မှာ တက်ခိုင်းထားတာပါပဲ…. ကင်းမြီးကောက် အပေါက်လေးတွေဟာ ကင်းမြီးကောက် မိခင်ကြီးရဲ့ ကိုယ်မှာ နေရင်းနဲ့ ကင်းမြီးကောက်မိခင်ရဲ့ ကိုယ်က အသားတွေကိုပါ တဖြေးဖြေး စားလိုက် ကြတယ်.. သူတို့ အမေလည်းသေရော သူတို့လေးတွေ လည်း ကြီးလာရောပေါ့.. သူတို့ကိုယ်တိုင် လည်း သွားနိုင် […]
မိန်းမတွေမှာ အလကားနေရင်း ငိုချင်နေတဲ့ အချိန်ရှိတယ် ဘာလို့မှန်းမသိဘူး တစ်ခါတစ်လေ ထိုင်ငိုနေတာ ဘယ်သူက ဘာလုပ်လို့လည်းဆိုတော့လည်း ဘာမှမလုပ်ဘူး ဒီတိုင်းငို ငိုချင်လို့ငိုတာ… လောကကြီးမှာ သူတို့တစ်ယောက်တည်း အရမ်းအထီးကျန်သလို အရမ်းဝမ်းနည်းပြီး အခန်းထဲမှာ ထိုင်ပြီးကို ငိုနေတာ… တစ်ကယ်အထီးကျန်လို့လားဆိုတော့လည်း မဟုတ်ဘူး အိမ်မှာလည်း လူတွေနဲ့ ရည်းစားလည်း ငုတ်တုတ်… တစ်ခါတစ်ခါ ငိုရင် မျက်ရည်ပေါက်ကြီးငယ်နဲ့ ရှိုက်ကြီး တငင်ကို ငိုတာ… တစ်ခါတစ်လေ ငိုနေရင်း မှန်ထကြည့်ပြီး မှန်ထဲက […]
ပိုက်ဆံရှာနည်းနှင့်ပိုက်ဆံအကြောင်း ၁။ ပိုက်ဆံ ရှာရာတွင် ဘယ်တော့မှ ဝင်ငွေတစ်ခုတည်းပေါ်မှာ မရပ်တည်ပါနဲ့။တခြားသော ဒုတိယဝင်ငွေ ဝင်နိုင်အောင် ရင်းနှီးထားပါ။ လူတစ်ယောက်က ဝင်ငွေတစ်ခုတည်းကို ခြေစုံပစ်ရပ်တည်နေရင် အဲ့ဒီဝင်ငွေ ရပ်တန့်သွားတဲ့နေ့ ခြေမကိုင်မိ လက်မကိုင်မိ ဖြစ်ရတက်ပါတယ်။ ဘဝမှာလည်း အားလုံး ဗြောင်းဆန်သွားတက်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒုတိယ ဝင်ငွေ ရနိုင်မယ့် နည်းလမ်းကို အမြဲရှာထားပါ။ ၂။ ပိုက်ဆံ သုံးရာတွင် သင့်မှာ မလိုအပ်တဲ့ ပစ္စည်းတွေဝယ်ပါများနေရင် သင့်မှာအမှန်တကယ် လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကို […]
ခါးသီးလွန်းပေမယ့် တစ်ချိန်ချိန်မှာ လက်ခံရမယ့် အမှန်တရား (၃) ခု
ခါးသီးလွန်းပေမယ့် တစ်ချိန်ချိန်မှာ လက်ခံရမယ့် အမှန်တရား (၃) ခု လောကနိယာမသဘောတရားကိုက အမှန်တရားဆိုတာ တခါတေလ ခါးသီးလွန်းလှပါတယ်။ သင့်အတွက် လက်ခံရခက်ခဲပြီး သင်လက်ခံရမှာ ကြောက်နေပေမယ့် တချိန်ချိန်မှာ မဖြစ်မနေ လက်ခံလာရမယ့် အမှန်တရား(၃) ခုကိုဝေမျှ ပေးချင်ပါတယ်။ ၁။ သင်ချစ်တဲ့သူအားလုံးနဲ့ တစ်နေ့ ခွဲရမှာဖြစ်တယ် ဒီအမှန်တရားဟာ စာရေးသူကိုအပါအဝင် စာဖတ်သူတို့ကိုပါ တဒင်္ဂ ငေးငိုင်သွားစေမယ့် အမှန်တရားတစ်ခုပါပဲ။ သင်ဘယ်လောက်ချစ်တယ်ပဲဆိုဆို သင်ချစ်တဲ့သူ သငျတနျဖိုးထားရတဲ့သူတှဟော တစ်နေ့ သင့်ကိုခွဲခွာ […]
စိတ်ဆန္ဒကို ဦးစားပေးခဲ့မိတဲ့ အိမ်ထောင်သည် အစ်မကြီးတစ်ယောက်ရဲ့ တောင်းဆိုချက်အရ တင်ပေးလိုက်ပါပြီ နောက်အိမ်ထောင်ပြုတဲ့ ဖခင် ၊မိခင်တိုင်း လိုလို အများစု ဘဝဇာတ်သိမ်း မကောင်းကြပါဘူး …။ ကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့ အမေ့ အဖေ့ကို အသနားပိုပြီး သားသမီးများက ပိုချစ်ကြတယ် …။ အသိစိတ်က အဖေ အမေ ဆိုပေမယ့် မသိစိတ်ကကြည်ညိုလို့ မရတဲ့ ဖခင်၊မိခင် ဖြစ်နေတာပါ …။ အသိစိတ်က သွေးသား တော်စပ်ပေမယ့် မသိစိတ်က သူစိမ်းတစ်ယောက် […]
အရင်းအနှီး နည်းနည်းနဲ့ အလုပ်စလုပ်မယ့်သူများ သိထားသင့်တဲ့ နည်းလမ်း (၈) ခု…
အရင်းအနှီး နည်းနည်းနဲ့ အလုပ်စလုပ်မယ့်သူများ သိထားသင့်တဲ့ နည်းလမ်း (၈) ခု… စွန့်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းရှင်များဟာ အောင်မြင်နိုင်လောက်တဲ့ စီးပွားရေးအိုင်ဒီယာများ ရှိတတ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ရင်းနှီးမြုပ်နှံနိုင်တဲ့ စွမ်းအားမရှိတာကြောင့် ရှေ့မဆက်ကြတော့ပါဘူး။ သူတို့မှာ ရင်းနှီးငွေ မရှိရင်ပဲ ခြေတလှမ်းတောင်မှ ဆက်မလှမ်းနိုင်တော့ဘူးလို့ ယူဆကြပါတယ်။ နေ့စဉ်နေ့တိုင်း လုပ်ငန်းသစ်များဟာ ဒေါ်လာ မီလျံနဲ့ချီပြီးတော့ စွန့်စားရင်းနှီးတဲ့လုပ်ငန်းတွေကနေ ငွေကြေးအရင်းအနှီးတွေ ရနေကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သင်မကြားလိုက်တာကတော့ လုပ်ငန်းတစ်တော်တော်များများဟာ အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအတွင်းမှာ ကျရှုံးသွားပြီးတော့ ရင်းနှီးထားတဲ့ မီလျံချီဒေါ်လာတွေဟာလည်း […]
မျက်နှာအေးဖို့ နှင့် ၀က်ခြံ ၊ တင်းတိတ်ကင်းဖို့
မျက်နှာအေးဖို့ နှင့် ၀က်ခြံ ၊ တင်းတိတ်ကင်းဖို့ ကသစ်ဆူး(ကသစ်ဖု)လေးတွေဟာမျက်နှာကဝက်ခြံနဲ့ နေလောင်ကွက်တွေကိုပျောက်ကင်းစေတဲ့အပြင် အသားအရေကိုပါ နုညံ့ ချောမွတ် စေတဲ့အစွမ်းရှိတယ် ဆိုတာတစ်ချို့သိပ်မသိကြပါဘူး။ ကသစ်ဆူးလေးတွေကိုအရွက်အစိမ်းရောင်၊ အပွင့်ကြက်သွေးရောင်ရင့်ရင့်ပွင့်တဲ့ ကုန်းကသစ်ပင်ရဲ့ပင်စည်ကနေရရှိနိုင်ပါတယ်၊ကသစ်ပင်ဟာပျှမ်းမျှပေ၃၀လောက်မြင့်ပြီးလူကြီးတစ်ဖက်စာလုံးပါတ်ရှိတတ်ပါတယ်။ လက်ပံ၊အင်ကြင်း၊ပေါက်တို့နဲ့အပြိုင် နွေရာသီမှာပင်လုံးကျွတ်ဝေဝေဆာဆာပွင့်လေ့ရှိပြီးထူးခြားချက်ကရနံ့လုံးဝမရှိပါဘူး၊ကသစ်ရွက်နုကိုဟင်းချိုချက်စားလို့လည်းရသလိုပြုတ်ပြီးသုပ် စားလို့လည်းရပါတယ်၊ အခေါက်၊အမြစ်။အပွင့်၊အရွက်၊ပဉ္စငါးပါးလုံးဆေးဘက်ဝင်တယ်လို့ ရှင်နာဂသိန်ဆေးကျမ်းမှာဖတ်ဘူးပါတယ် ကသစ်ဆူးကိုသွေးမလိမ်းခင်ရေနဲ့အရင်ဆုံးပြုတ်ပြီးမှလိမ်းရပါတယ်၊ အခုလိုပူပြင်းတဲ့နွေရာသီမှာသနပ်ခါးနဲ့ရောပြီးသွေးလူးရင်လည်းပါးပြင်ထက်မှာအတော်ကြာအောင် အေးစိမ့်ချောမွတ်နေတဲ့ခံစားမူလေးကိုရနေတာမျိုးပါ၊ တန်ဖိုးမကြီးပေမဲ့အစွမ်းထက်တဲ့ဒီကသစ်ဆူးလေးတွေကို မိုးရာသီမှာလည်းလိမ်းလို့ရအောင်အခုထဲကဝယ်စုထားဖြစ်တယ်၊ ကျမမျက်နှာပေါ်ကအကြည့်ရဆိုးတဲ့ဝက်ခြံဖုတွေကိုပျောက်ကင်းစေပြီးနေလောင်ခြောက်သွေ့နေတဲ့အသားအရေလေးတွေကိုပါနူးညံ့ချောမွေ့စိုပြေလာစေတဲ့ ဒီကသစ်ဆူးလေးတွေကိုကျမအရမ်းလည်းချစ်တယ်ရှင့့် Thaw Lin Khant‎ မ်က္ႏွာေအးဖို႔ ႏွင့္ ၀က္ၿခံ ၊ တင္းတိတ္ကင္းဖို႔ […]
မိမိကိုယ်ကိုရော တစ်ပါးသူကိုပါ သူယုတ်မာလော သူတော်ကောင်းလော (ဒါမှမဟုတ်) ကောက်ကျစ်သူလော ရိုးသားသူလော အကဲဖြတ် ကောက်ချက်ချတတ်ဖို မြတ်စွာဘုရားက နည်းပေးထားပါသည်။ ကောက်ကျစ်သူ လက္ခဏာများ ၁။ တစ်ပါးသူ၏ အားနည်းချက်အပြစ် အမှား များကိုဘယ်သူမှ မမေးပဲ ထုတ်ပြောတတ်ခြင်း၊မေးသူ ရှိခဲ့လျှင် ချဲ့ကားပြောဆိုခြင်း။ ၂။ တစ်ပါးသူ၏ အားသာချက် ကောင်းကွက် ဂုဏ်တို့ကိုကား မေးသူရှိတာတောင်မပြောခြင်း။ မဖြစ်မနေ ပြော ရသောအခါ၌လည်း ထိမ်ချန်၍ပြောခြင်း။ ၃။ မိမိ၏ အားနည်းချက် […]
တခါက မိန်းမတစ်ယောက်ဟာ တစ်ညနေခင်းမှာ အိမ်ထဲကနေ အိမ်ပြင်ကို ထွက်လိုက်တယ်။ ဆံပင်ဖြူကိုယ်စီနဲ့ အသက်အတော်ကြီးတဲ့ အဖိုးအို သုံးယောက်ဟာ အိမ်ရှေ့က ခုံတန်းလေးပေါ်မှာ ထိုင်နေကြတာကို တွေ့လိုက်ရတယ်။ မိန်းမဟာ သူတို့ကို တစ်ခါမှ မမြင်ဘူးလို့ အခုလို မေးလိုက်တယ်။ ” ရှင်တို့ ဘယ်သူ့ကို တွေ့ချင်လို့ပါလဲရှင့် ” ” ဒီအိမ်က အိမ်ထောင်ဦးစီး အိမ်ပြန်ရောက်ပြီလား ” လို့ အဖိုးအို တစ်ယောက်က သူ့ကိုမေးလိုက်တယ်။ ” […]
တခါတုန်းက အရမ်းအေးတဲ့ ညတစ်ညမှာ ဘုရင်ကြီးသည် မိမိရဲ့ နန်းတော်ကို ပြန်လာခဲ့စဉ်တွင် အဝတ်ပါးပါးလေး ဝတ်ပြီး မတ်တတ်ရပ်နေတဲ့ အဖိုအို ကင်းသမားကို တွေ့ရလေသည်။ ထိုအခါ ဘုရင်ကြီးသည် အဖိုးအိုနား ကပ်ကာ မေးလေသည်။ ” အဘ အအေးဒဏ် မခံစားရဘူးလား ? မအေးဘူးလား ?အဖိုးအိုလည်း ပြန်ဖြေလေသည်။ ” အရှင်မင်းကြီး.. အရမ်းအေးပေမဲ့လည်း ကျန်ုပ်မှာ ဝတ်စရာ အနွေးထည် မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် ကျွန်ုပ်အဖို့ အအေးဒဏ်ကို […]